Home / Foset Guide / Kwụpụ site Ntuziaka Nzọụkwụ na Ndozi na Otu Esi Zụta Ego Ntanetị N'ịntanetị
2020 / 11 / 19 nhazi ọkwaFoset Guide 3999 0
Obere ihie site na pọmpụ na-ezighi ezi nwere ike iyi obere mmekpa ahụ, mana ọ nwere ike iri puku kwuru puku ego gị kwa afọ. Tupu ị họrọ zụta ihe ọkpọkọ n'ịntanetị ọ ga-akachasị mma na ịmara otu esi achọpụta mgbata mgbata. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ bụ ọrụ Mee N'onwe Gị ma ị nwere ike ime ya n'enweghị enyemaka nke ọkachamara. N'ime ihe a, anyị ga-akọwa otu esi enyocha usoro mmiri gị maka obere mmejọ, họrọ nhọrọ kachasị mma nke ọkpọkọ, wee dochie mpempe ahụ na-ezighi ezi. Ihe ikwesiri ime bu ka iwere uche na uche gi guru ihe a.
Kedu ihe kpatara ịchọpụta ihe kpatara ya?
O kariri ihe di nkpa ichota ihe ojoo ahu ma gbanwee mgbata ma obughi ya gha aburu gi nsogbu n'ọdịnihu. Ihe nwere ike ịgwọ na mbido nke obere obere nleghara anya nwere ike bụrụ nnukwu ego ma ọ bụrụ na ị na-eleghara ya anya. Ozugbo ị chọpụtasịrị ihe kpatara ya, ihe ị ga-eme bụ ịchọ ego faucets online.
Ihe kpatara ihi mmiri pọmpụ
Taps dị ezigbo mfe idozi-ozugbo ị ghọtara kpọmkwem otu ha si arụ ọrụ yana ihe ị ga-eme iji rụzie ha. Ihe na-esonụ bụ ole na ole n'ime ihe ndị mere pọmpụ gị nwere ike ịmalite ihipu mmiri:
Mmiri mmiri na-amalite ịwụda mgbe ihe nchacha, O-yiri mgbaaka, ma ọ bụ akàrà dị n'ime pọpụlị ahụ nwere unyi ndị ruru unyi, kpuchie ha na mmanu mmanu, ma ọ bụ n'ihi na ha emechaala. Denweta mgbata dị mfe, agbanyeghị, ọ dị iche na-adabere n'ụdị mgbanye ị nwere.
Ozugbo ị ghọtara okirikiri nhọrọ ukwuu, ị nwere ike n'ụzọ ziri ezi na-ewepụ mgbata, nọ ọdụ na akụ nke leakage, na mgbe na-agbanwe eji mmiri ma ọ bụ idozi ruru unyi mmiri. Ọ ga-adịrị gị mfe ịchọta ihe ọhụrụ mgbe emechara nsogbu ahụ, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọ bụ mmejọ igwekota ị ga-achọrịrị ọnụ igwekota taps ire ere online.
Ihe ị ga-ahụ tupu ịgbanyere eriri mmiri
A ga-atụle akụkụ ndị a tupu ịhọrọ ịgbanwe ọkpọkọ mmiri:
Kpebisie ike na nhazi nke ukwu: Enwere ụdị mgbatị dị iche iche nke 4: ụdị bọọlụ, katrij, diski, yana mkpakọ. Mgbe ụfọdụ, ụdị mgbata nwere ike ịchọpụta site na mpụga anya, agbanyeghị, ọ na-abụkarị, a ga-enwerịrị ọkpọ ahụ iji chọpụta ụdị ọkpọ ọ bụ.
Wepụ Mgbata ahụ: Otu ọkọlọtọ ndị isi ahụ na-agbanye ụdị mmiri ọ bụla mgbe ha na-amalite ịpị mgbata maka ọrụ ndozi ma ọ bụ dochie. Nọgide na-enwe usoro niile yana usoro ị na-ewepụ ha. Nke a ga-enyere gị aka ma tinye mgbata azụ na ibe gị ma mata akụkụ ndị a ga-agbanwe.
Gini mere iji kpọtụrụ onye ọkachamara?
Agbanyeghị ọrụ nrụzi a tụlere n'elu bụ ọrụ Mee N'onwe Gị karịa ma ọ bụ na-erughị mana ịchekwa oge gị dị oke ọnụ ma jiri aka gị rụzuo ebumnuche gị, ị ga-akpọtụrụ onye ọrụ ọkpọ ọkachamara. Mightnwere ike ịchekwa ego site na ịme ya n'onwe gị mana ọ bụrụ na ọrụ mmezi ahụ mebie, ọ ga-efu gị okpukpu abụọ.
Anyị nwere olile anya na ntuziaka ndị a dị n'elu ga-enyere gị aka mgbe ọ bụla ịchọrọ ịgbanwe taps ma ọ bụ pọmpụ gị n'ụzọ akụ na ụba.
Nke gara aga :: Etu ị ga-esi họrọ igwe mmiri kwesịrị ekwesị Osote: Ayszọ ndị na - eduga n'ịhọrọ kichin kachasị mma
2020 / 11 / 19 4385
2020 / 11 / 18 4283